Fanontaniana&Valiny: Fantaro i Biyanto Rebin, mpikatroka ho an’ny fiteny Javaney/Indoneziàna · Global Voices teny Malagasy
Biyanto no hampiantrano ny kaonty @AsiaLangsOnline ny 27 May - 02 Jona 2020
Voadika ny 26 Mey 2020 17:19 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , Português, Italiano, Ελληνικά, English
Biyanto Rebin, mpikatroka ho an'ny fiteny Javaney/Indoneziàna. Sary an'i Rachmat04 ho an'ny Wikimedia Indonezia / CC BY-SA.
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Biyanto Rebin (@meenyo) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Biyanto Rebin (BR): Biyanto Rebin no anarako. Mpankafy teny ary mpahay momba ny teny. Nanomboka teny amin'ny lisea no nitombo tsikelikely ny fahalinako tamin'ny fiteny. Ho an'ny diplaomako ambaratonga voalohany dia nianatra ny teny shinoa sy fiteny marobe hafa aho, isan'izany ny Italiàna. Ny fandraisako anjara tamin'ny Wikipédia no nanamafy ny fikatrohako ho an'ny fiteny, navitrika tao nanomboka tamin'ny 2006 ho an'ny fiteny Indoneziàna sy Javaney. Ankoatra ny Wikipedia, nandraisako anjara koa ny Wiktionary sy Tatoeba mba hampitomboana sy hampanan-karena ireo fampidirana amin'ny fiteny Indoneziàna sy Javaney.
BR: Hatramin'ny niasàko ho an'ny Wikimedia Indonezia, dia nirotsaka an-tsehatra aho, mandray anjara, ary manokan-tena ho fandrisihana ny tanora, ny fampandrosoana sy ny fanapariahana malalaka ny fahalalàna amin'ny fiteny indoneziàna sy ireo fiteny hafa ifampiresahana ao Indonezia. Fikambanana iray tsy mitady tombontsoa ara-bola ny Wikimedia Indonezia ary mpiara-miombonantoka iray ao an-toerana amin'ny Wikimedia Foundation, izay mivoaka amin'ireo sehatra maro manerantany ny asany, toy ny Wikipedia sy ireo tetikasa wiki hafa. Amin'ny maha-filohan'ny Wikimedia Indonezia ahy, izaho no manoratra sy mametraka ny drafitra isantaona anasàna olona maro mba hanatevina laharana ireo hetsika ataonay. Tianay ny hiantoka izay hahazoan'ny tsirairay fahafahana miditra maimaimpoana amin'ny fiteny tian-dry zareo. Ireo fiteny ao an-toerana no kendrenay. Mirotsaka an-tsehatra izahay ary mifandray tsy tapaka amin'ireo olona ao an-toerana mba hanangana vondrompiarahamonina amin'ny fitenin-dry zareo manokana. Taona maro lasa izao, nanomboka nahitana vokany ny fanolorantenanay, ary ny niafaràny dia anananay ny Wikipedia amin'ny fiteny Baliney sy Gorontalo, ary hatramin'ny Wiktionary amin'ny fiteny Minangkabau, noho ny asan'ireo goavana mpirotsaka an-tsitrapo ato aminay izay tsy mitsahatra ny manampy sy miaraka miasa aminay mba hanome antsika izao vokatra mahafinaritra izao.
BR: Tiako ny hibitsika mikasika ireo fahasahiranan'ny fiteny ao an-toerana [pdf] sy hampita an'io miaraka amin'ny fampiroboroboana ny Indoneziàna ho toy ny fiteny nasiônalinay ary ny antony ilànay mitahiry ireo fiteninay ao an-toerana [pdf].
BR: Tiako ny tsirairay mba ho afaka hahazo an-kalalahana ireo fahalalàna, ary amin'ny fitenin-dry zareo. Ny tenindrenin-dry zareo dia manandanja ihany koa toy ny fiteny fototra. Antenaiko mba ho voatahiry ny fahamaroampiteny ananantsika, izay manankarena tokoa, amin'ny maha-tokamiavaka sy tsy azo soloina azy.
Tantaran'ny media farany
24 Novambra 2019Mediam-bahoaka
12 Avrily 2019Hong Kong (Shina)
01 Aogositra 2016Afrika Mainty